Foam izinhlanzi. Foam izinhlanzi ngezandla zabo. Foam izinhlanzi Zander
Ezemidlalo Ukufaneleka, Ukudoba
Njalo Angler okhuthele kufanele abe ekuchithweni kwayo arsenal ebanzi ukudla okuhlukahlukene ahlukahlukene. Ngo ambalwa nje eminyaka ukhona, inhlanzi Foam babe saziso igiya isici. Nokho, Nakuba abanye spinnings uzame hhayi ukusebenzisa lolu hlobo ukudla okuhlukahlukene, base kungase kutholakale ngokwabo ngoba ekubambeni izinhlanzi okuzingela, futhi kwezinye izimo njengoba kuphakeme kakhulu kunokuvamile ukusebenza abicah lolo.
Inani Foam izinhlanzi
Foam angabonisi kuzibophezela e impahla yayo, enikeza lolo kwale nto ikakhulukazi ukuhamba, ukuhlinzeka ukufana esiphezulu nge lolo zemvelo. Plus, emoyeni egcinwa ezimbotsheni impahla wathi, lapho izinhlanzi emanzini, kuthatha isikhundla mpo.
Okubaluleke kakhulu iqiniso lokuthi ukudla okuhlukahlukene Foam nenhlanzi uncoupled futhi azisheleli off the hook, ngakho bathatha kuphumelela ngaphezu le abicah kwezinye izimo. Bona ingalungiswa kokubili kwi ingubo futhi ingwegwe double, okuyinto kunenye inzuzo.
Impregnation attractants - iphuzu elibalulekile noma trifle?
I embuzweni kuphawuleka ayashesha ukubamba iphunga, okuyinto nakanjani udlala ezandleni abadobi, ngoba ungenza impregnation Foam izinhlanzi zemvelo attractants. Ngokwesibonelo, ungasebenzisa igazi, uwoyela inhlanzi noma eziklanyelwe lolu injongo izinto. Iphunga lolo angeke phansi, ngoba Foam iphathwa elifakwe kudala inhlanzi ezansi ichibi nephunga zone kuka kwenza isebenze odlulayo eduze nomzingeli.
Fish Foam uhlobo lesilinganiselwa lolo, futhi akukho sizathu ethile ukushintsha degree womsebenzi, ezifana ngezinye izikhathi lolo uhamba phambili.
Ngokuvamile ekubambeni ku Foam izinhlanzi eyenziwa eside isivinini Ukusakaza noma wiring. Izintambo zikagesi ezisobala Uniform kumele kusetshenziswe emanzini angajulile. Ngesikhathi umsebenzi ofanayo isikhathi ngempumelelo potyazhkami Uda, hhayi kwekhoyili. Ngenduku udinga ngokuzumayo iyadluthula lolo kusuka phansi ekuqaleni the drive.
ukudla okuhlukahlukene enjalo mihle ngoba Pike, grouper, isiphika liwashwabadele ngokulinganayo kahle kungakhathaliseki izinga ungqimba amanzi. Lapho ngokudoba izinhlanzi Foam kungcono makudle induku elukhuni ifakwe ubukhulu monofilament ka 0.3 mm kuya 0.4 mm. Okuningi ukukhanya mugqa akufanele lisetshenziswe khona ukugeleza - kuba lukhulu ekuvuseleleni umdlalo lolo.
Foam izinhlanzi ngezandla
Izinto futhi amathuluzi adingekayo ukudala i kwesife okusebenzayo, ungakwazi ukuthola kalula emakethe. Udinga lokhu okulandelayo:
- sikelo (the libukhali ngcono);
- shayela (esikoleni abavamile);
- impintshisi noma wire bezihlahla;
- ibala utshwala.
Ukudala lolo nalutho esizayo
Kufanele kuqashelwe ukuthi inhlanzi Foam, ukukhiqizwa elichazwa ngezansi, ingabe akusizi efektri futhi ngokulinganayo kuhambisana kahle Pike, perch, Pike-iphezulu.
Ucezu Foam, okuyinto ukusika izinhlanzi, kufanele kube 7-10 mm obukhulu. Ezivamile mncane umaka ngepeni noma upende ezibonakalayo nentaba we lolo esizayo eside kufanele kube abangu-8 kuya 10 cm. Ngemva kwalokho, lo workpiece inqanyulwa kuyinto sikelo ebukhali kakhulu. Ukuze lula ahlabayo Foam kufanele agxishiwe iminwe yakhe eduze nentaba sibalo. Khona-ke, usebenzisa insingo kufanele usike yonke imiphetho anolaka nge izinhlanzi ukunika umumo oyindilinga. Kubalulekile kakhulu ukugcina olinganise lolo: umzimba kumele uzoba mkhulu kunokhalo umsila kwesigaba 3-5 mm.
Lapho ingxenye yokudala inhlanzi Foam-iraba ekhaya esingazilungisa amakhadibhodi noma insimbi izifanekiso - ngosizo lwabo, kuyoba lula futhi ngokushesha ukudweba nentaba. Sika ucezu lolo kusukela Foam Imininingwane nayo usebenzisa ezivamile zokubhala ummese.
Isisetshenziswa hook izikhala
Ngemva preform inqanyulwa, igwebu ngokurhaba ifakwe nenhlanzi izingwegwe. Kunezindlela ezimbili ukuba sibhekane ngokuphumelelayo lo msebenzi. Indlela elula - uthatha JIG ikhanda abavamile, ngokukhetha isisindo esifanele. Nge kusakhiwo Imi ikhaba, kusukela izinhlanzi umlomo eduze backrest. Imi okuholela sifakwe JIG, ngemva kwalokho ingxenye cut idinga ukulungiswa nge superglue. Sebenza ngokucophelela, akunakusetshenziswa kakhulu cindezela Foam, noma ukuyenga kuyoba ngendlela engenathemba ichithekile.
Indlela yokwenza Foam izinhlanzi yesibili, indlela more xaka? Ukuze wenze lokhu, luvutha usungulo. Kwenze ngembobo workpiece. I umqhewu ekhiqizwa ukuba kwaphoqa upiyano wire futhi ukusonta imikhawulo a pair of impintshisi ukuze bathole izindandatho. Lawa kutakuba kamuva bufakwe izingwegwe, kabili noma kathathu. Kuzo zombili lezi zimo, kufanele ilungiswe ukuze udosi wawusegunjini cishe phakathi izinhlanzi umzimba.
Amathiphu ambalwa ngoba lolo snap hook
Off the hook, esemgwaqweni lolo incike isisindo Sinker isetshenziswa, ngakho-ke kubalulekile kahle ukukhetha ubukhulu. Kufanele kube kancane kunangendlela ububanzi we Sinker enamathiselwe. Inzuzo Foam izinhlanzi ubhekwa yokuthi bangakwazi ifakwe kahle esikhulu hook offset, ngaphandle anake nakunaka ukuba umthwalo.
Ngezinye ekubambeni ku Foam lolo ungasebenzisa izinhlobo ezahlukene izinsimbi, kuhlanganise "eared", kodwa Imiphumela emihle siyithola lapho usebenzisa isisindo ezifana "udali". It is ngokuphelele ibekwe ku imihlathi nomzingeli ngenxa compactness yayo, ngakho libhubhisa kuba esebenza kahle kakhulu kangakanani.
Lapho ifakwe izingwegwe ezimbili ukudla okuhlukahlukene ingasetshenziswa, omunye ogibele phambi izinhlanzi, kanye, usayizi encane yesibili, eqondiswa phezu eside steel leash ngesikhathi ezingemuva lolo. Foam izinhlanzi asetshenzisiwe, ifakwe izingwegwe-Tees, kuphela amanzi ahlanzekile olujulile, lapho azikho snags, okuyiwona ungase ukubamba lokhu lolo. Tee kufanele ibekwe ngokunembile maphakathi inhlanzi, ikakhulukazi lapho Ukudoba Pike, njengoba yena ohlwitha lolo yonkana.
Uma workpiece usulungile ngokugcwele, kubalulekile ukupenda. Nanti ithuba lokuveza nemicabango yabo olungenamkhawulo namakhono kwezobuciko. Foam izikhala kungenziwa ababethi ngokuphelele yimuphi umbala. Fish wenze noma pearl elikhanyayo. Zingaba, futhi akuyona ukupenda - yalokho okuhle namanje yibhange.
kukhethwe kahle lolo umbala ayikwazi phansi, ngakho kungcono ukucabanga kusengaphambili, kulokho endaweni kuyoba lokudoba. Ngokwesibonelo, amadamu kanye yellow sandstone kungcono ukusebenzisa lolo amnyama. Uma ukudoba wenziwa emanzini nge phansi ezinodaka, ngeke usebenze kangcono, igwebu izinhlanzi ezinemibala egqamile.
Foam izinhlanzi isikhathi eside uma usebenzisa upende amanzi nemithi, kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi ezifana utshwala ibala efanelekayo. Upende engcono isetshenziswa ibhulashi ezivamile, prorisovyvaya amehlo, amaphiko, gills, umsila - lokhu kuyoba okwanele ukuheha nomzingeli. amehlo Fish zingenziwa ezinemibala ubuhlalu shiny, izinaliti axube ukuba umzimba. Indlela elula ukuhlobisa Foam umkhiqizo - zisebenzisa nakomaka unomphela anemibala ehlukene.
Ukuze Bait ukukhukhuleka ayikapheli, kubalulekile ukusebenzisa izinsimbi ezikhethekile. Indlela ephumelela kakhulu JIG-sinkers, okuyinto baye bazibonakalisa ungcono sprat nezinamathiselo efanayo.
Ifakwe JIG, igwebu izinhlanzi walleye show imiphumela emihle kakhulu, kokubili ebusika kanye nasehlobo. JIG ezinesisindo ubhekana indima Sinker-Donkey. Njengomthetho, it is eyenziwe ekubunjweni, kodwa njengoba isikhathi sihamba ezinye amakhono ungakwenza ngokwakho.
Cargo-JIG, ngokungafani kuya ibhola, ngomusa liphenduka ngapha nangapha ngesikhathi kuwa kwayo kancane, kanjalo ezengeziwe Lure izilwane ezidla ezinye iyehla iyenyuka. ukunyakaza abahlukahlukene zenziwa, futhi ngenxa lomnyango uxhumano indlela lolo hook JIG. Lokhu kukunika kanjani ukuyenga kwezinto ukufana nakakhulu izinhlanzi yangempela.
Ngesikhathi wiring JIG-Sinker Ungahudula phansi sandy, ngaleyo ndlela kudale ifu Murky ezokwenza sidonse amehlo izinhlanzi ezidla inyama. Kulokhu, hook Sinker uhlezi phezu phansi.
isisindo Isilinganiso izinhlanzi iflothi Foam walleye
Ezivamile Foam zenjoloba inhlanzi nge umthwalo-ikhanda ezingafanelanga kahle Zander ezingqimbeni amanzi elingenhla, ezifana lolo ukulayishwa kunalokho ngokushesha phansi nge Umqhubi kancane. Ngenxa yesisindo ke akusho lutho ngoba wiring e angajulile.
Ngakho-ke, lapho ekubambeni umhlaseli ezindaweni ukugeleza isilinganiso noma amile kunilungele amanzi ngesilinganiso ukusebenzisa lolo ne isisindo isilinganiso iflothi esithambile. Ngenxa yalokhu izinhlanzi ungukukhanya ikakhulukazi neselula, yiziphazamiso ezihehayo hhayi kuphela perch, kodwa futhi yimuphi omunye izinhlanzi ezidla inyama.
Ukukhiqizwa Isisindo esivamile iflothi ngezandla zakhe
Yenza le lolo kungaba ekhaya. Ukuze wenze lokhu, thatha cylindrical ngensimbi enisemikhawulweni Foam ukuntanta 17 mm ububanzi kanye 125 mm ubude. Yisike kanye. Khona-ke kubalulekile ukubeka ngendlela ngokukhethekile ikhefu imbobo (kungathatha emazombezombe we wire kagesi). Ngo ngezansi kwangaphakathi iflothi kuzo zombili neengcezu yayo kufanele usike inkatho encane kulo ibekwe okusanhlamvu cylindrical enesisindo mayelana '25 Esikhathini yokugcina kumele kube khona imbobo ngaphansi ipayipi.
isisindo Sinker kunqunywa isekelwe yokuthi kubalulekile ukugcwalisa amanzi cishe lonke iflothi, kusale kuphela surface elincane ichopho 3 cm. Sinker edingekayo ukubeka phezu tube futhi ukuhlela ngaphakathi iflothi (3 cm kusuka phansi).
Khona-ke, i-halves ezimbili aphethwe ndawonye ngumuntu iflothi usebenzisa superglue yomiswa ngokucophelela. Ingxenye iflothi, okuzoba emanzini, upende uwoyela ezisekelwe is ababethi umbala ogqamile ansundu. Leyongxenye esele uzobe engaphezulu kwamanzi, futhi kusetshenzwe by upende omhlophe amafutha.
Okulandelayo lesikafula induku sidlulile ngepayipi e iflothi, line ukudoba kuboshelwe ekupheleni abavamile kakhulu Foam zenjoloba inhlanzi, ifakwe hook double. Kusukela Pike uthanda ukuhlasela lolo enjalo kusuka phansi, khona-ke akukho sidingo okwengeziwe ukuze uyipende. Umhlaseli bazobona kuphela ngalé amnyama ngokumelene ilanga.
Foam inhlanzi, enziwe ngezandla zakhe, bathethelele ngokugcwele umzamo wena.
Njenganoma iyiphi enye lolo inhlanzi Foam babe elithola abo kanye nebubi. Izinzuzo lokhu uhlobo lokudla kodobo phakathi okulandelayo:
- kalula enza ngezandla zabo;
- umdlalo omuhle ngesimo induku kanzima;
- ikhono ayashesha ukubamba iphunga;
Ngo kufanele nebubi ezifana waphawula:
- ijubane ukuwohloka;
- lima kumele kube ebukhali kakhulu futhi benamandla ukuze umhlaseli ubanjwe on izingwegwe futhi ayikwazanga siphukile;
- kubalulekile ukusebenzisa induku eqinile noma isiyengo akusho ukuheha eziyingozi.
abakhiqizi yanamuhla ukunikela ezihlukahlukene gear ukudoba. It akunakuphikwa ukuthi lolo Foam ungase uthole indawo yayo ku arsenal of zonke spinnings.
Ukudoba ingono - indlela for Anglers imfundamakhwela
Indlela tie ifindo? Izinhlobonhlobo futhi ulwazi oluwusizo
Carp ukudoba izinduku kanye reels. carp izesekeli
Ukudoba North Sosva (Khanty-Mansi Autonomous Area): isizinda ukudoba, umzila wamanzi, Trophies
Top esondweni Spinning: simo
Baubles Universal - "Cicada"
Skin ohluphekayo ngemva ukushefa? ukhilimu ifektri "Freedom" - futhi azikho izinkinga
Izinto ezesabekayo Indian: remakes futhi "imisebenzi phezu khulula indaba ephathwayo"
Amasokisi okubalulekile exfoliating izithende: Izibuyekezo
Mayweed: incazelo yohlobo, lapho kukhona izitshalo futhi kanjani ukulwa naso
"Akriderm GC": analogue ukuzitshalela hhayi kakhulu (ukubuyekezwa)
Njengoba ukuhoxisa amanzi kusukela umzimba
Loud amagama brand: Isilinganiso. brand Popular namalogo zabo
Yini ehlukanisa ekolishi kusukela ekolishi? Ukhiye Ukukhethwa sokunquma
Ubugovu - abantu bakudala nge ubuntu ezimfushane noma sekwenzekani?
I-Antivirus ye-Windows 10. Uhlu lwamahle kakhulu
Neminye Effective Pharmacy: umthengi Izibuyekezo
On ukubaluleka intuthuko yesayensi, kwezobuchwepheshe kanye nomphakathi emazweni asathuthuka, umnotho kahle - konke futhi indima okudala yesayensi nobunjiniyela njll